Akụkọ - Ndị ngagharị iwe UK kwaturu ihe akpụrụ akpụ nke ohu ahịa ohu na narị afọ nke 17 na Bristol
LONDON - Ndị na-eme ngagharị iwe “Black Lives Matter” kwaturu otu ihe akpụrụ akpụ nke onye na-azụ ahịa ohu ohu na narị afọ nke 17 na Bristol nke dị na ndịda Britain na Sọnde.
Ihe onyonyo na soshal midia gosiri ndị ngagharị iwe na-adọpu Edward Colston na plinth ya n'oge ngagharị iwe na etiti obodo. N'ime vidio mechara, a hụrụ ndị ngagharị iwe ka ha na-atụba ya n'ime Osimiri Avon.
Ihe oyiyi ọla nchara nke Colston, onye rụrụ ọrụ na Royal African Company ma mechaa rụọ Tory MP maka Bristol, guzoro na etiti obodo ahụ kemgbe 1895, bụrụkwa ihe esemokwu na afọ ndị na-adịbeghị anya mgbe ndị na-eme mkpọsa kwusiri ike na ọ gaghị anọ n'ihu ọha ghọtara site na obodo.
Onye nkwuputa John McAllister, 71, gwara ndị mgbasa ozi mpaghara, sị: “Nwoke ahụ bụ onye na-azụ ahịa ohu. Ọ na-emesapụ aka nye Bristol mana ọ bụ n'azụ ịgba ohu na ọ bụ ihe nlelị. Ọ bụ mkparị na ndị Bristol. ”
Onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii bụ Andy Bennett kwuru na ụfọdụ ndị 10,000 gara nnọkọ Black Lives Matter na Bristol na ndị ka ukwuu mere "n'udo". Otú ọ dị, “e nwere obere ìgwè nke doro anya na ha mere mpụ nke imebi iwu na-akwada ihe akpụrụ akpụ n'akụkụ Bristol Harborside,” ka o kwuru.
Bennett kwuru na a ga-eme nyocha ịmata ndị nke a metụtara.
Na Sọnde, iri puku kwuru iri puku mmadụ sonyeere ụbọchị nke abụọ nke ngagharị iwe megide ịkpa oke agbụrụ n'obodo ndị Britain, gụnyere London, Manchester, Cardiff, Leicester na Sheffield.
Ọtụtụ puku mmadụ gbakọtara na London, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-ekpuchi mkpuchi ihu na ọtụtụ na gloves, BBC kọrọ.
N'otu n'ime ngagharị iwe a mere na mpụga ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya US na etiti London, ndị ngagharị iwe gbadara n'otu ikpere wee bulie aka ha elu n'ikuku nke "ịgbachi nkịtị bụ ime ihe ike" na "agba abụghị mpụ," ka akụkọ ahụ kwuru.
Na ngosipụta ndị ọzọ, ụfọdụ ndị ngagharị iwe nwere akara aka nke na-ezo aka na coronavirus, gụnyere nke gụrụ: "E nwere nje karịrị COVID-19 na a na-akpọ ya ịkpa ókè agbụrụ." BBC kwuru na ndị ngagharị iwe gburu ikpere maka otu nkeji tupu ha na-akpọ "enweghị ikpe nkwụmọtọ, enweghị udo" na "ndụ ndị isi ojii."
Ngagharị iwe a na Britain bụ akụkụ nke nnukwu ngosipụta zuru ụwa ọnụ nke ndị uwe ojii gburu George Floyd, onye Africa America na-ejighi ngwa ọgụ.
Floyd, 46, nwụrụ na May 25 na obodo Minneapolis nke dị na United States mgbe onye uwe ojii na-acha ọcha gbusoro ikpere n'olu ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji itoolu ka ejiri aka kee ya ihu wee kwuo ugboro ugboro na ọ gaghị eku ume.